Xog: Siyaasiin Caan ah oo Qaarkood ay Xilalka Dalka ugu sareeya hayaan oo loo diiday inay galaan Madaxtooyadda Somalia. – Hornafrik Media Network
Warar ay heshay Hornafrik ayaa sheegaya in Caawa laga hor istaagay Gudoomiyaha Aqalka Sare ee Somalia, Cabdi Xaashi iyo Raiisul Wasaarihii hore ee Xukuumadda Somalia, Cali Maxamad Geedi inay galaan Aqalka Madaxtooyadda Somalia. Waxayna Wararku intaasi ku darayaan in Ciidamadda Illaaladda Madaxtooyadda Somalia ay ku wargaliyeen Masuuliyiintan iyo Xildhibaano ka tirsan 2-da Aqal ee Dawladda Somalia oo siyaabo kala gooniya u yimid Madaxtooyo in lagu armay inaysan soo galin.
Cali Maxamad Geedi oo mar ka soo noqday Raiisul Wasaare Dawladda KMG ah ee Somalia ayeey Ciidanka Madaxtooyo ula dhaqmeen sida qof caadi ah, Waxaana loo diiday inuu soo dhaafo Albaabka 1-aad ee Madaxtooyo, iyadoo markii uu soo dagayna lagu amray Ciidanka inay tallaabo ka qaadan haddii uu ka dhaqaaqi waayo Albaabka Madaxtooyo, isagoona ka laabtay halkaasi iyadoo ay ka muuqato Carro xooggan.
Gudoomiyaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi oo isna u socday Madaxwaynaha ayaa loo diiday inuu ka gudbo Albaabka 2-aad ee Madaxtooyo, iyadoona Ciidanka halkaasi jooga ay u sheegeen inaysan haysan amar ay ku daayaan. Wuxuuna ku dooday inuu yahay Gudoomiyaha Aqalka Sare oo uusan u baahnayn Amar, Laakiin Ciidanku waxay u sheegeen inaysan ba aqoon waxa uu sheeganayo, taasoo ku keentay inuu goobta isaga huleelo isagoo ka caraysan Tallaabadda lagu hor istaagay.
sidoo kale illaa iyo in ku dhow 50 Xildhibaan ayaa siyaabo kala gooni gooni ah iyagana looga hor istaagay inay galaan Madaxtooyadda Somalia., Waxaana Galabta iyo Caawa ay Ciidanku cid kasta u sheegayeen inay haystaan Awaamiir adag oo aysan daynayn qof aan la soo gudbin Magiciisa.
Sarkaal ka tirsan Madaxtooyo oo codsaday inaan Magaciisa loo adeegsan Warbaahinta ayaa Hornafrik u sheegay in Amarka uu siiyay Agaasimaha Madaxtooyadda Fahad Yaasiin.